မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: Sanctions to Myanmar . ( Dr Tint Swe )
Sanctions to Myanmar . ( Dr Tint Swe )
မြန်မာပြည်ထဲက လူထု ဒီလိုနေလာတာ ကြာပါပြီ။
စီးပွားရေး ဖွင့်တယ်ဆိုတုံးကလည်း ငတ်နေတာဘဲ ။
စီးပွားရေး ပိတ်လည်း ဒုံရင်းပါဘဲလေ။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး)
အာဏာရှင်တို့၏ စီးပွားရေးတလွဲတချော်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် နိုင်ငံအချို့၏ ချော့မြှူရေးပေါ်လစီကိုလျစ်လျူရှုကာ၊
အာဟာရ ချို့တဲ့နေသည့် ကလေးသူငယ်များ၊ သန်းနှင့်ချီသည့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ နှင့်
ဒုက္ခသည်များကို လက်ညှိုးထိုးပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကို
သို့ရာတွင် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရာတွင်
ပညာရှင်အမြင်၊ စစ်အစိုးရဘက်မှ ရှေ့ နေ လိုက်သူများအမြင်နှင့်
နိုင်ငံရေးအမြင်နှင့် အကြီးအ ကျယ် ကွဲလွဲနေပါသည်။
နှစ်ပတ်ဗီဇာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ကြိမ်-သုံးကြိမ်သွားရောက်၊
အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သည့် မြန်မာလူမျိုးအနည်း ငယ်ကို အင်တာဗျူးပြီး
ရေးထုတ်လိုက်သည့်စာတမ်းများမှာ မည်သို့အဆင့်ရှိမည်ကို နားလည်ယူနိုင်သည်။
တချိန် တည်းတွင် နိုင်ငံရေးနောက်ခံရှိသူ သို့မဟုတ် မရှိသူ အဆင့်မြင့်ပညာတတ်
မြန်မာပြည်သားများကလည်း စစ်အုပ်စု အ တွက် လျှောက်လဲချက်ပေးနေကြသည်။
မည်သို့ပင်ရှိစေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ပြုတ်ကျသွားချိန်နှင့်
စစ်ထောက်လှမ်း ရေးမှူးချုပ် ခင်ညွန့် ပြုတ်ကျသွားချိန်များတွင်
အလားတူ မြန်မာလူမျိုးအများအပြား မြောင်းထဲရောက်သွားခဲ့သည်။
(၁) ၁၉၈၈ ခုက ကျောင်းသားများဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာနှိမ်နင်းခဲ့မှု
(၂) ၁၉၈၈ ခုနောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများ
(၃) ၁၉၉၆ ခုတွင် နိုင်ငံခြားသံတမန်တဦးကို အကျဉ်းထောင်တွင်း၌ သတ်ဖြတ်ပစ်မှု
(၄) အိုင်အယ်လ်အိုမှ မှတ်တမ်းယူထားသည့် ၂ဝဝ၁ ခုနောက်ပိုင်း အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများ
(၅) ၂ဝဝ၃ ခုနောက်ပိုင်း ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးရငွေများကို တရားဝင်စီးပွားရေးထဲသွင်းမှုများ
(၆) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများ
(၇) ၂ဝဝ၃ ခု ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲ
နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကို ရက်ရက်စက်စက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့သည့်အခါ
တာဝန်သိနိုင်ငံ အားလုံးက ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း၊ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊
ကန့်သတ်ခြင်း စသည့် သင့်လျော်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ သော ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနှင့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် တို့က
၁၉၉၂ ခုမှ ၂ဝ၁ဝ ခုအထိ နှစ် စဉ်နှစ်တိုင်း ချမှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခု ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေ၊ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင် နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများ၏
ကောင်စစ်ဝန် ဂျိမ်းလင် ဒါနစ်ခိုးလ်ကို မိတ္တူပို့စက် (ဖက်စ်စက်) လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု
ဟူသောရာဇဝတ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချပြီး နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့၍
သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခု ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်
ရန်ကုန်စက်မှု တက္က သိုလ်တို့မှ ကျောင်းသားတထောင်ကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ရာ
ရာနှင့်ချီ၍အဖမ်းခံရပြီး ကျောင်းအားလုံး ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ကားလ်စ်ဘဂ်ကုမ္ပဏီ (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်အစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး
ဟင်နီကင် ကုမ္ပဏီ (နယ် သာလန်) က မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ဒေါ်လာသန်း ၃ဝ ရင်းနှီးထားမှုမှ ဆုတ်ခွာကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ကိုဒတ်၊ အက်ပယ်လ်၊ ဝေါ့လ်ဒစ်စနီ နှင့်
ပက်ပ်ဆီကုမ္ပဏီများက မြန်မာနိုင်ငံမှ လုံးဝ ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂက ၁၉၉၆ ခု အောက်တိုဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းကောင်း၊ ဘုံရပ် တည်ချက်ကိုလည်းကောင်း သဘောတူချမှတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အီးယူ၏ဘုံရပ်တည်ချက်ထဲတွင်
လက်နက်များနှင့် လက်နက်နည်းပညာများ ရောင်းချမှု သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးမှုကို
တားမြစ်ခြင်း၊ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် များ မိသားစုများ လက်ဝေခံအပေါင်းအသင်းများအပေါ်
ဗီဇာကန့်သတ်ခြင်း၊ စစ်အစိုးရအရာရှိများ၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား ပိုင်ဆိုင်မှုများကို
၁၉၉၆ ခု စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် အမေရိကန်သမတ ကလင်တန်က
၁၉၉၇ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကြမ်း ကို လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုပြီး
မြန်မာ နိုင်ငံသို့ အမေရိကန်၏အကူအညီကို တားမြစ်လိုက်သည်။
အီးယူမှကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည့် လေ့လာ ချက်တခုအရ
မြန်မာပြည်တွင် အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခံရသူ ၈ဝဝဝဝဝ (ရှစ်သိန်း) ရှိနေကြောင်း
ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက် ၁၉၉၇ ခု မတ်လ ၂၅ ရက်တွင် အီးယူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထွေထွေဦးစားပေး စနစ် GSP အကျိုးခံစားခွင့်များကို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီသို့ တိုးတက်မှု ကင်းမဲ့နေခြင်းကို ထောက်ပြလျက်
ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း ၁၉၉၇ ခု ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
GSP အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ခု စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တက်ဆာကို (အမေရိကန်ရေနံကုမ္ပဏီ) က
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရဲတံခွန်ရေနံနှင့် သ ဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ
၄င်း၏ရှယ်ယာ ၄၂. ၉% ကို ပက်ထရိုးနာ့စ် (မလေးရှားကုမ္ပဏီ) နှင့်
ပရီမီယာရေနံ (ဗြိတိသျှ ကုမ္ပ ဏီ) သို့ ဒေါ်လာသန်း ၂၆ဝ ဖြင့် ရောင်းပစ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံက ယခင်ချေးငွေများကို ပြန်မဆပ်သဖြင့်
၁၉၉၈ ခု စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာပြည်နှင့်
၂ဝဝ၃ ခု မေလ ၃ဝ ရက်နေ့ညနေတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်
ထောက်ခံသူများကို ကြံ့ဖွတ်အသင်း၏ လက်ကိုင် တုတ်ဖြစ်သော
စွမ်းအားရှင်များက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
နအဖက လူသတ် သမားများ၊ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများကို
အရေးယူမှုမရှိခဲ့ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသူ ၁၉ ဦးကိုသာ
ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းခဲ့ပြီး တနိုင်ငံလုံးရှိ အဲန်အယ်လ်ဒီပါတီရုံးများကိုလည်း ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်သမတ ဘွတ်ရ်ှအစိုးရက
ကြံ့ဖွတ်အသင်းဝင်များကိုပါ ဗီဇာပိတ်ဆို့ လိုက် သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်က
‘၂ဝဝ၃ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဒီမိုက ရေစီအက်ဥပဒေ’ ကိုချမှတ်လိုက်ပြီးြ
မန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အချက်အလက်အချို့ကို မဖြည့်ဆီးမချင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ သွင်းကုန်အားလုံးကို တားမြစ်ခြင်း၊
ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လက်ရှိဗီဇာတားမြစ်ချက်နှင့်
တားမြစ်ချက်တို့ကို ဥပဒေအဖြစ်အသက်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၁၆ ရက်တွင် အီးယူကောင်စီက ပစ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းကို
တိုးချဲ့လိုက်ပြီး ဝန်ကြီးများ၊ ဒုဝန်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးဟောင်းများနှင့်
အထက်တန်းစစ်အရာရှိများ၏ မိသားစုဝင်များကို ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံက စီးပွားရေးအကူအညီအားလုံးရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေဆဲ စီမံကိန်းများမှလွဲ၍
တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ဦဗ အသစ်ပေးမှုကို ရပ်တန့်လိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု ဇွန်လ ၂၅ ရက် တွင် အီးယူက ခရီးသွားလာရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကို
တိုးချဲ့ကာ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အကြီးတန်းမန်နေဂျာများ၊
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များကို ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
၂ဝဝ၃ ခု စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်
မီးယပ်ရောဂါအတွက် အကြီးစားခွဲစိတ်ကုသမှု ခံ ယူခဲ့ပြီး
၂ဝဝ၃ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မျိုးချစ်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၁၁၁ အရ
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာဘဏ် နှစ်ခုကို ငွေမည်းခဝါချမှုအတွက်
၂ဝဝ၄ ခု အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အီးယူကောင်စီက
မြန်မာစစ်တပ်၏ အဆင့်နိမ့်အဖွဲ့ဝင်များကို ထည့်သွင်း လိုက်ပြီး
သို့မဟုတ် အကြွေးပေးမှုကို တားမြစ်လိုက် သည်။
ဆန္ဒပြ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များကို ၂ဝဝ၇ ခု စက်တင်ဘာလတွင်
သွေးထွက်သံယိုနှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက် ၂ဝဝ၈ ခု ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် စစ်အုပ်စု၏
ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်ရေး JADE အက်ဥပဒေကို ချမှတ်လိုက်သည်။
ထိုကာလက ကျောက်မျက်ရတနာများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
ဝင်ငွေရရာ တတိယအကြီးဆုံးဇာစ်မြစ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ယင်း သို့ ချမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် ၁၉၈၈ ခုကတည်းက ချမှတ်ခဲ့သည့်
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပို့ကုန်များ တားမြစ်မှုနှင့် နောက် ပိုင်းတွင်ချမှတ်ခဲ့သည့်
ဆက်လက်ထိန်းထား လျက် ၂ဝဝ၇ ခု အောက်တိုဘာလတွင်
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် မိသားစုများအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု များ
ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း ၂ဝဝ၇ ခု နိုဝင်ဘာလတွင်
စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု များ ချမှတ်လိုက်ပြီး
ပို့ကုန်သွင်းကုန်များကို ပိတ်ပင်လိုက် သည်။
- ဆင်းရဲမွဲတေမှုအတွက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများကို အပြစ်တင်သူများရှိသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ဟုဆိုသည့် တံခါးပိတ်စီးပွားရေးပေါ်လစီအောက်တွင်
၁၉၈၇ ခုကတည်းက ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ LDC ဖြစ်နေခဲ့ရာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများထက် စောခဲ့ပြီး
ယခုအနှစ် ၂ဝ ကြာ တံခါးဖွင့်ဈေး ကွက်စီးပွားရေး ဖြတ်သန်းခဲ့သော်လည်း LDC အဆင့်မှ မလွတ်မြောက် နိုင်ခဲ့ပေ။
- ဆူးအက်တူးမြောင်းကြောင့် အစောပိုင်းနှစ်ကာလများ၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆန်တင်ပို့မှုဖြင့်
ချမ်းသာခဲ့ရာ သ ဘာဝသယံဇာတများမှာ မတို့ထိဘဲ ရှိခဲ့သည်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကျိုးပြုခဲ့သည်ဟူသောအဆို မှာ လက်ခံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ သူမ စာရေးပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ် ရှားရေးအတွက် ကူညီမည်ဟု ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူမ လွတ်လာပြီးနောက်တွင် ‘ပြည်သူလူထုက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုများကို တကယ်ဖယ်ရှားစေလိုလျှင် ကျမ စဉ်းစားပေးပါမည်’ ဟုပြောခဲ့သည်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကို မည်သူတို့က ဖယ်ရှားစေချင်ပါသနည်း။ ထိုသူတို့က စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့် ပြောသည် ဆို ခြင်းမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် (၁) ¤င်းတို့မှာ အမြတ်အစွန်းရဖို့အတွက်သာ စီးပွားရေး လုပ်လိုသူများဖြစ်ကြ၍ (၂) စစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ပေးစာကမ်းစာ စားနေသူများဖြစ်ကြ၍ (၃) ပညာ ရှင် လေ့ကျင့်ခန်းသက်သက်လုပ်နေသူများ ဖြစ်ကြ၍ ဖြစ်ပါသည်။
မူအားဖြင့်ပြောရလျှင် အနောက်အုပ်စု၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများမှာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဆိုင်ရာ တာဝန် ဝတ္တရား တခုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အပြင်းထန်ဆုံးအသုံးအနှုန်းများဖြင့် မကျေနပ်ကြောင်း ဖော်ပြ ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသည့် ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကိုကြည့်လျှင် အာရှတိုက်သားတို့သည် ဘိုး ဘေးတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးစံများကို ဂုဏ်ယူသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ သည် လူသားဝါဒအပေါ်အခြေခံသည်ဟုဆိုပြီး ကျင့်ဝတ်နှင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုကို ကျင့်သုံးပါသည်။
Posted by Mr Htay Tint at 5:28 AM
To the World Economic Forum in Davos 2011
FOR IMMEDIATE RELEASE (27 January 2011, Geneva)
All the Senior General’s Men in Burmese Parliament...
အန်ဂျီအို ရိုက်စား ဗိုလ်ချုပ် ချွန်တွန်း
News & Articles on Burma
Sanctions from Myanmar . . ( Dr Hlaing Myint )
သို့မောင်မင်းချင်း မောင်ရှေးရှု
စစ်အပျက်များက ပျော်စရာဖြစ်လာတယ် ။